I-IATA: Imikhawulo emisha ye-Omicron ikhinyabeza ukululama kokuhamba ngendiza
Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » I-IATA: Imikhawulo emisha ye-Omicron ikhinyabeza ukululama kokuhamba ngendiza
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Ohulumeni bomhlaba basabela ngokweqile ekuqhamukeni kokwehluka kwe-Omicron futhi baphendukela ezindleleni ezazanywa nezahlulekile zokuvalwa kwemingcele, ukuhlolwa ngokweqile kwabahambi kanye nokuvalelwa bodwa ukuze kubambezeleke ukusabalala.
I-International Air Transport Association (IATA) umemezele ukuthi ukululama ekuhambeni kwezindiza kuqhubeke ngoNovemba 2021, ngaphambi kokuvela kwe-Omicron. Isidingo samazwe ngamazwe siqhubekisele phambili inkambiso yaso ekhuphukayo njengoba izimakethe eziningi zivulwa kabusha. Kodwa-ke, ithrafikhi yasekhaya yaba buthaka, ngenxa yokuqina kwemikhawulo yokuhamba eChina.
Ngoba ukuqhathanisa phakathi kwemiphumela yanyanga zonke ka-2021 kanye no-2020 kuhlanekezelwa umthelela omangalisayo we-COVID-19, ngaphandle uma kuphawulwe ngenye indlela zonke iziqhathaniso zifika kuNovemba 2019, okulandele iphethini evamile yokufunwa.
Isidingo esiphelele sohambo lwendiza ngoNovemba 2021 (esikalwe ngenzuzo yamakhilomitha abagibeli noma ama-RPK) sehle ngo-47.0% uma kuqhathaniswa noNovemba 2019. Lokhu kumake ukwenyuka uma kuqhathaniswa nokufinyela kuka-Okthoba okungu-48.9% kusukela ngo-Okthoba 2019.
Ukuhamba ngendiza kwasekhaya kwehle kancane ngoNovemba ngemuva kokuthuthukiswa okubili kwanyanga zonke okulandelanayo. Ama-RPK asekhaya ehle ngo-24.9% uma kuqhathaniswa no-2019 uma kuqhathaniswa nokwehla ngo-21.3% ngo-Okthoba. Ikakhulukazi lokhu bekuqhutshwa yiChina, lapho ukugcwala kwezimoto kwehle ngo-50.9% uma kuqhathaniswa no-2019, ngemuva kokuthi amadolobha amaningana ethule imingcele eqinile yokuhamba ukuze aqukathe (pre-Omicron) ukuqubuka kwe-COVID.
Isidingo sabagibeli bamazwe ngamazwe ngoNovemba sasingu-60.5% ngaphansi kukaNovemba 2019, okwenza ngcono ukwehla okungama-64.8% okurekhodwe ngo-Okthoba.
“Ukusimama kwezimoto zezindiza kuqhubekile ngoNovemba. Ngeshwa, ohulumeni basabela ngokweqile ekuqhamukeni kokwehluka kwe-Omicron ekupheleni kwenyanga futhi baphendukela ezindleleni ezazanywa nezahluleka zokuvalwa kwemingcele, ukuhlolwa ngokweqile kwabahambi kanye nokuvalelwa bodwa ukuze kubambezeleke ukusabalala. Akumangazi ukuthi ukuthengiswa kwamathikithi aphesheya okwenziwe ngoDisemba nasekuqaleni kukaJanuwari kwehle kakhulu uma kuqhathaniswa no-2019, okuphakamisa ikota yokuqala enzima kakhulu kunalokho obekulindelwe. Uma ulwazi lwezinyanga ezingama-22 ezedlule lukhombise noma yini, kungukuthi akukho ukuhlobana okuncane phakathi kokwethulwa kwemikhawulo yokuhamba kanye nokuvimbela ukudluliswa kwegciwane emingceleni. Futhi lezi zinyathelo zibeka umthwalo osindayo ezimpilweni nasezimpilweni. Uma isipiliyoni siwuthisha ohamba phambili, asethembe ukuthi ohulumeni bazonaka kakhulu njengoba siqala unyaka omusha,” kusho UWillie Walsh, IATAUMqondisi Jikelele.